perseus Junior Member
07-22-2016, 04:31 PM ဘတ်စကားပေါ်မှာ ထောက်တာလေးတွေ ပိပိနှိုက်တာလေးတွေ စတဲ့ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးကြပါဦးဗျာ။
Aungmc32 Junior Member
08-03-2016, 12:55 AM ဖတ်လို့မရဘူး
10-19-2016, 12:12 AM ထောက်လှမ်းရေးကတော့ . ၂ ကြိမ်ဖြစ်ဖူးတယ်. တစ်ကြိမ်က သာကေတဘက်ပြန်တယ့် ၃၅ နဲ့ ည ၈နာရီ လောက်ဖြစ် မယ်ထင်တယ် .
ကား ပေါ်တက်လိုက်ပီး ရှေ့ဘက်အခြမ်းကို တိုးသွားမိလိုက်တယ် . ကားကကြပ်ပီးလူများ နေတော့ မက်တပ်ရပ်တောင် အလယ်တန်းမှာပဲရပ့်ရတယ်. ရှေ့မှာလည်းမိန်းကလေးဆိုတော့ အသားယူတယ်ထင်မှာစိုး လို့. အလိုက်တသိ သူပုခုံးဘေးကိုအားနည်းနည်း စိုက်ပီး တိုးမိလိုက်တယ်.ကိုယ်ပဲကောင်းချင်တာလား သူပဲကံကောင်းချင်တာလားမသိ ပေမယ့် ကောင်မ လေ့းရဲ့ထမင်းအိတ်လေးဆွဲထားတယ့် လက်နေရာ နဲ့ ငယ်ပါးနဲ့ထိမိပါလေရော . အဲဒါနဲ့ သူကလှမ်းအကြည့် အားနာပါတယ်ဆိုတယ့်အပြုံးနဲ့ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိတယ်.(တကယ်တော့ ဘယ်လိုပြုံးပြခေါင်းညှိမ့် ပြ မိလဲတောင်မမှတ်မိ) ပြုံးပြအပြီးကားပေါ်လူတွေတက်လာတော့မှ ဟိုက်ဒုက္ခပဲ ရှောင်ဖို့က မလွယ်တော့ဘူး . သူနောက်ဘက်ကပ်ရင်လည်း ပို တောင်ဆိုးလာတယ်ဆိုပီးထင်ဦးမယ် လူ တွေကလည်း ကောင်မလေးနောက်သွားကပ်တယ်ဆိုပီး ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် လုပ်ကြဦးမယ်. မထူးဘူးဆိုပီး အဲ့နားမှာပဲပေတေပီးရပ်နေလိုက်တယ်. ခဏကြာတော့ ကားကကြပ် . အမောင်းက ကြမ်း . ခဏခဏထိမိပါလေရော. ကိုယ့် ညီလေးကလည်း အာ့မျိုးဆိုဟန်မဆောင်နိုင် . မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးချင်တယ်. ဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်လည်ရောက်တော့မယ် မထူးဘူးဆိုပီး. တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် ကားလှုပ် တုံး လက့်ံနဲ့မထိထိ့အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ . နောက်လည့်ကြည်လေ ရော. မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး .ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လုပ်နေလိုက်တယ်. ကိုယ်လည်း သူမကြိုက်ဖူးဆိုပီး တက်နိုင်သလောက်ရှောင် နေ လိုက်တယ်. ခဏကြာ တော့ ပြန်ထိမိတာပဲ . အဲ့တခေါက်ကျတော့ သူ့လက်သန်းကပါ ကစားလာတယ် . ပျော်ပီလေ. ကိုယ်တွေက ချက်ဆို နားကွက်ကမီးတောက်ပီးသား. တပ်ကြွစွာနဲ့ ကိုယ်လည်းကိုယ်ကိုင်ထားတယ့် ထမင်းချိုင့်လေးကို ကြပ် လို့ရွှေ့သလိုနဲ့. သူစကပ်အောက်လေးနား စတီးချိုင့်ကိုင်ထားတယ့် လက်ကို ရွှေ့ . သူတစ်ခါပွတ်ရင် ကိုယ်တစ်ခါကိုင်နဲ့ ပွတ်ကိုင့်နဲ့ခရီးဆက်လိုက်တာ သူဆင်းမယ့်နေရာရောက်တယ့်အထိပဲ .
သူဆင်းတော့ လိုက်ဆင်းပြီး သူနောက်လိုက်သွားသေးတယ် . မဖြစ်သေး ပါဘူးဆိုပီး လှည့်ပြန်ခဲ့မိတာ . ပြန်တွေးမိတိုင်း အခုထိနောင်တရလို့မဆုံးဘူး. ဘော်ဒါတို့ရေ.
Thanks given by: smart1500 , htun htun , starking3333
10-24-2016, 03:48 PM Big နောက်ထပ် တစ်ခုက ကား ပေါ် ကဆိုပေမယ့် ထောက်လှမ်းရေးတော့ ဟုတ်ဖူး . ကိုယ့် ညီလေး အကိုင်ခံရတာပါ .ကိုင်တာကလည်း မိန်းကလေးကကိုင်တာ မဟုတ်ဖူး . ယောကျားလေးကိုင်တာပါ . ကိုင်ခံရတာက ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ဖူး . ကျုပ်က အားနာတက်တယ့်ကောင်ဆိုတော့ မိန်းမ ကောင်း တွေကို တော့ ပေါက်ကရလုပ် ချင်စိတ် နည်းတယ် (မလုပ်ချငိ ဘူး ဟု အပျက်ပြောချင်းမဟုတ်ပါ) . ထား ပါတော့ဗျာ .ဒါနဲ့ ကျုပ်ကကား စီးရင် နောက်ဘက်မှာ စီးလေ့မရှိဘူး . (ကိုယ့်စိတ်ကိုမန်ိုင်လို့ ) ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာပဲစီး လေ့ရှိတယ် . တစ်နေရှေ့ ဘက်ချမ်းမှာ စီးနေတုန်း ကိုယ့် ကွေးကျိကို လက်နဲ့  ပွတ်လိုက့်လို့ ကြည့်လိုက်တာ ဘဲ ကြီးဗျာ .ပွတ်တာက ကြာနေပါပီ. ခဏခဏ ပွတ်ခံထိတော့မှ သတိထားမိတာ. ကျုပ် ကလည်း ဘဲဆိုတော့စိတ်မဝင်စားဘူး. သူ့လက်ကို အထုတ် ကိုင်ထားတယ့် လက်နဲ့ တွန်းဖယ်ပြီး အေး ဆေး ပြန်နေတာပေါ့ . ဘဲကီးက ဒီတစ်ခါ လက်နဲ့ မပွတ်ပဲ . အားရပါးရလာကိုင်တယ်ဗျာ . ဒုတိယတစ် ခါတော့ လက်ကို ခက်စပ်စပ်လေး ရိုက်ချပီး တော့ ရှောင်နေလိုက်တာပေါ့. အဲ့ဒါ လည်း ခဏနေတော့ ထပ်လာကိုင် တာပဲ. ကျုပ်လည်း ဒီတစ် ခါ မဖယ်ဘဲ . သူ့ကို ကြည်နေလိုက်တယ် . ကိုယ်က ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ ကြည့်နေတာကို သဘောကျတယ်ထင်ပီး စိတ်ကြိုက်ကိုင်နေတာ . ခေါင်းမော့ကြည့်တော့ ထထိုးတော့မယ် ပုံစံ ဖြစ်နေတာ မြင်သွားမှ နောက်မှတ်တိုင်ဆင်းသွားပါလေရော. အကိုင်ခံ ရချင်းတုန်းက မကြိုက်ပေမယ့် . ပြန်စဉ်းစားမိတော့ လည်း ဂွေလှိမ့်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတော့ ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ . ကိုင်ခဲ့ တယ့် ကွီး ဒီစာဖတ်နေရင် . နောက်ခါ လာကိုင်ပါလို့ . ကောင်မလေး တွေလည်း ကိုင်လို့ရတယ်နော်. ကျုပ်က ကားပေါ်က ရင်ခုန်စရာလေးတွေ လာ share ယုံပါဗျာ . ( Gay လည်း မဟုတ်ပါဘူး )
Thanks given by: poeti1102
poeti1102 Junior Member
10-30-2016, 03:04 AM ဒါမျိုးရေးချင်နေတာကြာဘီ ကြာကူလီလို့လဲထင်ခံရမှာကြောက်တယ်. ထားပါတော့လေ ဒီမှာတော့ နှာဘူးတွေပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ် (ဂန်ဒူးမပါ) ဖြစ်ပုံကတောဗျာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်ကပေါ့ ၁၂၄ လှိုင်သာယာကျောင်းကားပေါ်မှာပေ့ါဗျာ. အဲ့နေ့ကအင်းစိန်ပေါက်တောဝတံတားကြီးမှာ လမ်းတွေပြင်နေလို့ ကားတွေက သမိုင်းကနေချိုးပြီး ဘုရင့်နောင်တံတားကနေဖြတ်မောင်းကြတယ်. သဘောကတော့ လမ်းမှာလူမတင်ဘူးပေါ့ ဆက်တိုက်မောင်းတာ.လူကလဲကျပ်ချက်ပေါ့ဗျာ. ကျနော်ကလဲတက်တက်ချင်းအလယ်နားပဲ. ပြီးတော့ နောက်လူတွေထပ်တက်လာတာနဲ့ပဲ အရှေ့တိုးပေးရင်းကားသမားနောက်နားရောက်သွားတယ်.ကားသမားအခန်းနဲ့ နောက်ခန်းနဲ့ကလဲ သံတန်းတွေခြားထားတယ်ဆိုတော့ ရှေ့အပေါက်ကဆင်းမရဘူးပေါ့. အဲ့မှာ ကားကလဲပိတ် လူကလဲမချဆိုတော့ အကြာကြီးလူကြားကျွန်တော်ရောက်နေတာ(ကျောင်းသူလေးတွေကြားပေါ့) . ကျောင်းသူတာပြောတာ body ကတော့ကိတ်ပ့ဗျာ. ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့်အရှေ့မှာ တယောက် ဘေးမှာကတစ်ယောက်စီမတ်တပ်ရပ်စီးနေကြတယ်. အဲ့မှာစတာဘဲ အရှေ့ကတစ်ယောက်ကို ကားကကြပ်တော့ ညီလေးနဲ့ခနခနသွားသွားထိမိတယ်. မတတ်နိုင်ဘူး ကားကလဲအရမ်းကိုကြပ်တာ. ပထမက ထီးကို လက်မှာချိတ်ပြီးစီးတာ. နောက်တော့ထီးကို အောက်မှာထောက်လိုက်တယ်အရမ်းညောင်းလာလို့လေ. အရှေ့ကကောင်မလေးက ခနခနထိမိတော့လှည့်ကြည့်တယ်. ကျနော်လဲ ဆောတီးပါလို့ လူအရမ်းကြပ်နေလို့ပါလို့ပြောလိုက်တော့ သူလဲခေါင်းလေငြိမ့်ပြီး အင်းရပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးပြန်လှည့်သွားကော.အာပြောပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်လဲ အကြိုက်ကိုထောက်တော့တာပဲ သူကတော့ငြိမ်ခံနေလေရဲ့ ဘာမှတော့မပြောတော့ပါဘူး. ဖီးလ်တော့တော်တော်ကိုတက်နေတာ မနည်းမထွက်အောင်လုပ်နေရတယ်းP . ကိစ္စကမပြီးသေးဘူး
ထီးကို ထောက်ထားတဲ့လက်ကလဲ အငြိမ်မနေဘူး ဘေးကကောင်မလေးတင်နဲ့သွားထိနေတယ်. မထိအောင်အရှေ့တိုးပေးတော့ အရှေ့ကလူကိုသွားထိတယ်(သူလဲကျောင်းသူပဲ). အာ့နဲ့မတတ်နိင်ဘူးဆိုပြီး အိုးနည်းနည်းကိတ်တဲ့သူကိုပဲမထိတထိလိုက်လုပ်နေလိုက်တော့တယ်. ကောင်းလိုက်တာအဲ့တုန်းက ရှယ်ပဲ ရှေ့ကိုထောက်လိုက် လက်ကနှိုက်လိုက်နဲ့
အရေးအသားမရှင်းဖြစ်သွားရင် ဆောတီးပါနော်. နောက်လဲ အချိန်ရှိရင်ရေးပါအုံးမည်. Find